Zvese zvinoratidza kuti Apple AirTags inoshandisa bhatiri mabhatiri | IPhone nhau
Isu tave kutofungidzira kuti Apple ichavhura yayo «Matagi» pamusika, iwo madiki madhizaina neNFC uye localization izvo mune dzidziso zvinotibvumidza kuti tibatane nyore nyore nemidziyo yedu yekumba, tsvaga makiyi akarasika uye uzive kuti mangani akawanda zvinoshandiswa isu taizokwanisa kumuburitsa. Iva zvazvingaita, pane mubvunzo chaiye pamusoro pemhando ipi yemabhatiri ayo Apple achashandisa kupa simba mudziyo wako. Kudonhedza kwekupedzisira kunoisa kutarisisa pamabhatirii eCR2032 ayo akatove akashandiswa mumidziyo yakafanana neiya yeiyo Tile brand.
Maererano ne MacRumors uko kwavanoratidza kuve vakawana masosi akavimbika, Aya maApple AirTag anoshandisa CR2032 mabhatiri. Aya mabhatiri ndeechinyakare, haakwanise kudzoreredzwa uye anozoda kuchinjwa nguva dzese padzinopera. Semuenzaniso, izvo zveTile brand zvinogara rinenge gore, kunyangwe izvo zvichinyatsoenderana nekushandisa kwatinozvipa. Ehe, isu tinofungidzira kuti Apple ichasanganisira aya mabhatiri muchigadzirwa zvakananga kana tachiwana. Aya mabhatiri haawanzo kudhura, asi akapararira uye ari nyore kuwana kunyangwe muzvitoro, saka haafanire kuve dambudziko.
Kunyangwe isu tese tichizvitora sezvisina basa kuti vachazoshandisa NFC, sekureva kwemuongorori Ming-Chi Kuo, Apple inogona kushandisa iyo Ultra-Wideband sisitimu iyo inovimbisa yakaderera kushandiswa, kuitira kuti usiye tekinoroji yeBluetooth uye yeWiFi iyo yaizobatanidza mutengo wakakura. Zvisinei, munguva pfupi yapfuura gakava rinorembera pamusoro peUWB uye bhatiri rinoshandiswa muiyo iPhone. Ngazvive sezvazvingaite, chishandiso ichi chichava chinoshamisira kune akawanda HomeKit mashandiro senge kuronga kweimwe michina, nekuti kana chimwe chinhu chinogara chichienda nesu, ndiyo chaiyo iPhone yedu, kunze kwekuti akawanda maApple zvishandiso ari inowirirana zvachose nayo. itsva system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvese zvinoratidza kuti Apple AirTags inoshandisa bhatiri mabhatani
Apple News inotendeukira kune yakasarudzika kufukidzwa kweruzivo rweCoronavirus